Geofumadas ee duulimaadka, January 2009 - Geofumadas
Geofumadas on duulimaadka, January 2009
Janaayo, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub, dhowr
Gacaliyayaashu, maalmahan way socdaan; oo u dhexeeya qorshe hawleedka sanadkaan, ka-aargoosiga balansiga Maxaa dhacay oo la kulmey duqeylaha baaxadda waxa ka tarjumaya dejinta qiimaha cadawga sanadka siyaasadeed ...
Isku qorida nalaga soo celinta kooraska Wadarta Goobta; Marka la eego, markii aan arko sawirada sidan oo kale ah ee warbixintan, waxaan fahamsanahay sababta ay u badan tahay in ay ku dhawaaqeen sababtoo ah waxaan ka tagay maalinta hore.
Waqtigan xaadirka ah, halkan waxaa ku yaal qaar xiiso leh oo ku saabsan kuwa jecel akhrinta wanaagsan iyo geofumadas heer sare ah.
Si fiican u sakhraamay
Stereowebmap, muuqaalka muuqaalka rikoodhka ah ee shabakada; aad u xiiso badan, ayaan weli ka shaqeynayaa sida ay u gaareen.
Geo adigoon tangles lahayn, Hagaha Isbaanishka PostgreSQL, PostGIS, MapServer, PHPMapScript waxaa qoray Andrés Herrera. Dhacdadana ku dar akhristahaaga buuggan, waxyaabo badan oo xiiso leh.
Forum-ka Sawir-fogaynta, oo ah dadaal ay sameeyeen Oscar Arostegui. Waxaan rajeyneynaa inaanu korinno oo aanaan helin cawl badan oo ka mid ah garabkii dhexdhexaadiyaha ... taas oo ku lug leh dulqaad badan oo leh nooc kasta oo isticmaala.
Toban saadaalinta 2009, mawduucyo xiiso leh waxa aan fileyn karno sannadkan arrimaha ku saabsan xaaladaha degaanka.
Guatemala waxay samaysaa isbadalo, haysashada marka hore beerta dadweynaha oo leh internet khadad lacag la'aan ah; waa inaad uun ka fekertaa amniga maxaa yeelay tuuggu waa meesha ugu fiican ee lagu helo qalabka teknoolojiga.
Maxaa ka dhacaya golaha
Gabriel Ortiz dib u hawli ikhtiyaarka ah in la wadaago faylasha
Forum-ka Cartesia, Wax soo saarka waddada .kmz ee GPS Garmin nuvi
Ku saabsan Ku-saabsan AutoCAD iyo software kale oo qallafsan
Kordhinta AutoCAD si aad u aragto faylasha waaweyn ee Google Earth
Isbedel adeegyada qadada ilaa hal km
Maxaan ka filan karnaa ArcGIS 9.3.1
Isticmaal AutoCAD on mac
Ku saabsan khariidadda webka
Placeopedia, wikipedia oo juqraafi ah
Automating daaqada dhulka google
Gaadiidka Google ee magaalooyinka 50
Goobidda Khariidadda Furan gudaha boostada
blog Google Earth GPS KML mapserver egeomates My
Post Previous«Previous AutoCAD mar walba ma jiro
Post Next Mawduuca, Muuqaalka kaliyaNext »
2 Jawaab "Geofumadas al vuelo, enero 2009"
Xaqiiqdi waad isticmaali kartaa. Waa koox aad u wanaagsan huh, habka aan ugu biiray.
lezuck isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxa ay ka mid tahay xiriirrada. Miyaan u isticmaali karaa sawirka si aan ugu dhejiyo koox facebook ah? (Waxaan helay jilaa, hehe, wuxuu igu xasuusinayaa maalinta kowaad ee aan qaadnay xD)
TOPOGRAPHY ... SOLO IMAGES